Garsooraha dalka oo dhan - Rabbi Michael Avraham
Garsoorka dalka oo dhan
Jawaabta > Qaybta: Anshaxa > Garsoorka dalka oo dhan
Bixin Waxaa la weydiiyay 3 sano ka hor
Sidee buu Rabbi u fahmay su'aasha Ibraahim 'Xaakinka dhulka oo dhan caddaalad ma samayn doono'? Caloosha la'aanteed akhlaaqdu ma ku xidhan tahay? Haddii kale, haddii akhlaaqdu ay tahay shay waajib ku ah oo kaliya in la raaco doonista Eebbe, la’aanteedna waajibka akhlaaqdu aanu macne lahayn, sidee Eebbe ‘la waydiin karaa’ la’aantiisa akhlaaqda?
mikyab Shaqaale Waxaa loogu jawaabay 3 sano ka hor
waa maxay dhibku? Xataa haddii akhlaaqdu ay ku xidhan tahay awoodda Ilaah oo keliya, Ibraahim waxa uu wax ka weyddiiyey iswaafaq la'aanta.
Garqaadkii u dambeeyay Waxay ku jawaabtay 3 sano ka hor
Ibraahim ma oga inuu Ilaah la hadlayo.
Wuu fahmayaa inuu la hadlayo qof karti leh oo u yimid inuu caddaalad sameeyo. Markaa waxa uu isku dayaa in uu wax is-daba-marin ku sameeyo isaga oo isku daraya go'aaminta waxa falka habbooni yahay.
David Siegel Waxay ku jawaabtay 3 sano ka hor
Maxay ka dhigan tahay inaan la ogaanin inuu Ilaah la hadlayo?
Waxaana dul taagan saddex qof oo mid ka mid ahi uu ahaa H. oo aanu garanayn intii ay munaasibaddu socotay
Tawreedku waxa uu inoo sheegay in ay tahay iyo hadalkiisa gudaha laakiin Ibraahim ma uu ogayn.
Haddaba ma laga yaabaa in Ilaah ku dhex dhashay Ciise ??
Haddi aad hesho masas dadka iyo dameeraha duufsada oo hadla markaas wax walba way noqon karaan.